Home Warar Xiiso Leh Wararkii ugu dambeeyay dagaal culus oo ka dhacay Jubbada Hoose
J/Hoose (Halqaran.com) – Waxaa faah-faahin dheeraad ah ka soo baxaya dagaal culus oo ka dhacay deegaanka Taabta ee gobolka Jubbada hoose, kaasi oo dhexmaray Ciidamada Kenya iyo Ururka Al-Shabaab.
Wararka ayaa sheegaya, in dagaalka uu yimid, kadib markii sida la sheegay ay Al-Shabaab weerar ku qaadeen Saldhiga Ciidamada Kenya ee degaanka Taabta, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal socday muddo saacad ka badan.
Dadka degaanka Taabta ayaa ku soo warramaya in weerarka Al-Shabaab uu ahaa mid markii hore ku bilaawday hoobiyeyaal, balse markii dambe uu dhacay dagaal toos ah oo labada dhinac uu khasaaro kasoo gaaray.
Sidoo kale, Wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in deegaanka Taabta ee lagu dagaallamay ay hadda ay ku sugan yihiin Ciidamada Kenya, isla markaana ay wadaan dhaq dhaqaaqyo Ciidan.
dagaal culus oo ka dhacay Jubbada Hoose